The New Humanitarian | HEY'ADA MSF OO KU BAAQDAY IN LA QAADO XANIBAADA DUULIMAADYADA
HEY'ADA MSF OO KU BAAQDAY IN LA QAADO XANIBAADA DUULIMAADYADA
NAIROBI, 27 June (IRIN) – Hey’ada caalamiga ah ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn MSF ayaa ka codsatay Dawlada Kenya inay ka qaado xanibaada dhamaan duulimaayada Soomaaliya, oo ay ku jiraan duulimaadyada bini’aadanimada.
Kenya waxa ay xanibaada kusoo rogtay duulimaadyada taga Soomaaliya 20kii bishan June kadib markii Dawlada Mareykanka ay digniin ku bixisay weeraro argagaxiso oo macquul ah in lala beegsado safaaradeeda ay ku laadahay caasimada Nairobi.
War ay soo saartay Hey’ada MSF ayaa waxa ay ku sheegtay in mamnuucida Duulimaadyada Soomaaliya ay hakad xun gelineyso hawlaha gargaarka bini’aadanimo ee Soomaaliya, taasi oo inteeda badan dhinaca hawada looga gudbiyo Nairobi.
Inta badan hey’adaha gargaarka ee ka shaqeynayay Somalia waxa ay ku tiirsanaayeen duulimaadyada Qaramada midoonay iyo Xafiiska gargaarka bin’aadanimo ee gudiga reer yurub, si ay ugu gudbiyaan kaalmadooda dadka Soomaaliyeed ee u baahan.
Hey’ada dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn waxa ay sheegtay in hadii aysan deg deg usoo laaban duulimaadyada, in barnaamijyada gargaar ee hey’ada MSF ee Soomaaliya oo ay ku jiraan sadex isbitaal iyo 14 xaruumo caafimaad ay go’doon noqonayaan. Iyadoo intaa ku dartay Hey’adu in ka hor Xanibaada duulimaadyada ay qorsheyneysay barnaamij lagu nafaqeynayo caruurta nafaqo daridu heyso, halkaasi oo tobankii maalmood ee ugu danbeeyey ay ku dhinteen 20 caruur ah nafaqo daro awgeed.
Dhinaca Shirkadaha diyaaradaha ee qaada Jaadka ayaa iyaguna saameyn ay ku yeelatay xanibaadan. Himat Vaghela oo ah Agaasimaha Maamulka shirkada diyaaradaha Capital Airlines ayaa u sheegay IRIN in dhibaato ay kasoo gaartay mamnuucida duulimaadyada diyaaradahooda.
Himat waxa uu sheegay in ay maalin walba shirkadooda ay laba diyaaradood oo Qaad ah geyn jirtay Soomaaliya, isla markaana ay doonayeen in mid sadexaad ay bilaabaan. “waxaanu maalin kasta luminaynaa todobo kun oo dollar oo qasaaro ah ayuu yiri” Himat.
Dalka Soomaaliya ayaa maalin walba waxaa diyaaradaha Jaadka ka qaada dalka Kenya ay geyn jireen laba iyo labaatan kun oo Kiilo garaam oo Qaad ah. iyadoo ay qasaaro ku keentay mamnuucidan dadka ka ganacsada Qaadka iyo kuwa beera labaduba.